Ndira 20, 2017
America yagadza mutungamiri wayo wechimakumi mana nemashanu, VaDonald Trump, pahurongwa hwanga huchionekwa nepasi rose.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Ndira 20, 2017.
Madzimai emuZimbabwe anoti ari kuyemura zvikuru kuratidzira kuri kuitwa kuAmerica kuchitungamirwa nemadzimai achinyunyuta nekugadzwa kwemutungamiri mutsva wenyika iyi, VaDonald Trump.
Vanhu vakawanda muZimbabwe vatambira kugadzwa kwemutungamiri mutsva weAmerica, VaDonald Trump, zvisina mutauro uye sekurongwa kwazvange zvakaitwa vachiti zvinhu zvanaka kudai ndizvo zvinofanirwa kutevedzwa nevezvematongerwo enyika muZimbabwe neAfrica yose.
VaTrump Vanogadzwa Kuitwa Mutungamiri weAmerica
Shoroma yemuAmerica, VaDonald Trump, vari kutoreswa mhiko yekuva mutungamiri we America wechimakumi mana neshanu. Kutoreswa mhiko kuchaitwa masikati anhasi muWashington DC
Ndira 19, 2017
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mu America zvinoti zvinoshuwiro yekuti hurumende itsva yaVaDonald Trump ibvise zvirango zvakatemerwa hurumende yaVaRobert Mugabe nevamwe vavo muZanu PF..
Vamwe Voshora Hurongwa hweBhavhadhe raVaMugabe kuMatopos
Vamwe vanhu vari kushora hurongwa hwebhavhadhe remutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, richaitwa muMatopos National Park mudunhu reMatabeleland South vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo yakavigwa vanhnu vakaurayiwa panguva yeGukurahundi.
Vakaremara Voudza Amai Mupfumira Zvavanoshuvira Kuitirwa neHurumende
Gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, Amai Prisca Mupfumira, vakaremara vanofanirwa kubatsirwa kuti vazviyamure voga muhupenyu kwete kuramba vachingopemha.
VaParirenyatwa Voyambira Vanhu Kuti Vasamwe Mvura Ine Tsvina
Gurukota rinoona nezvehutano, Dr David Parirenyatwa, vari kukurudzira vanhu kuti vangwarire mvura yavari kunwa kuti vasatapuririrwe zvirwere zvakaita setyphoid kana manyoka zvokonzerwa nekuwandisa kwemvura iri kunaya.
Nyanzvi Dzozeya Zvingadzidzwe neZimbabwe Kubva kuAmerica neGambia Mutungamiri wenyika yeamerica mutsva, VaDonald Trump, vari kutora mhiko nemusi weChishanu muWashington DC apo vatungamira America kwemakore masere apfuura, VaBarack Obama, vanenge voenda pamudyandigere.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Ndira 19, 2017
Vanhu vemunzvimbo dzakavhiringwa neGukurahundi votaura pamusoro pehurongwa hwebhavhadhe raVaMugabe richaitirwa kuMatabeleland mwedzi unouya.